Bannaanbax lagu dalbanayo in la sii daayo Xaashi Cumar oo Muqdisho lagu qabtay – Radio Muqdisho
Bannaanbax lagu dalbanayo in la sii daayo Xaashi Cumar oo Muqdisho lagu qabtay
Dadweyne ayaa isugu soo baxay taallada Daljirka-Daahdoon kuwaas oo dalbanayay in dowladda Talyaaniga ay sii dayso Xaashi Cumar Xasan oo muddo 18 sano ah ku jira xabsi ku yaalla dalka Talyaaniga.
Dadka isu soo baxay waxaa ku jiray odayaal dhaqan, aqoonyahanno iyo dadweyne kale oo isaga yimid qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir.
Muuse Xabbad Tafad oo ka mid ah ehelka Xaashi xadgudub ku tilmaamay in qof aan dambi lahayn muddo dheer xabsi lagu hayo. Wuxuu tilmaamay in wax dambi ah uusan galin Xaashi uuna xaq u leeyahay in la sii daayo.
“Dambi uu leeyahay Xaashi ma jiro, xaqdaro ayuu ku xiran yahay dad cadaow ah ayaa ka dambeeyay xariga dhibane Xaashi, inkastoo mid ka mid ah dadkii ku marqaati furay in xaashi uu dilay Wariye u dhalataya dalka Talyaaniga uu qirtay in falkaasi uusan waxba ka ogeyn, laakiin uu rabay oo kaliya in Talyaaniga la geeyo marka cid marqaati aan lagu heyn ma aha sharci in xabsi uu isaga sii jiro” ayuu yiri Muuse.
Prof. Yaxye Sheekh Caamir oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa dowladda Soomaaliya ka codsaday inay gacan ka gaysato sidii uu caddaalad u heli lahaa muwaadinkaan oo muddo dheer xabsi ku jira. Wuxuu intaa ku daray in dadkii marqaatiga ahaa qaarkood ay qirteen inay been sheegeen.
“Laba nin ayaa ku marqaati kacday xaashi mid ka mid ah xili hore ayuu dhintay midka kalena dhawaan ayuu qirtay in marqaati beenaale uu u noqday arinkaasi dooda badan ayaan ka sameeyay anigoo talyaaniga jooga awax dambi ah malahan xaashi oo si xaqdara ah ayuu ku xiranyahay waana rajeynayaa in xoriyadiisa uu helo “ayuu yiri Prof Yaxye Sheekh Caamir
Ugu dambeyntii ayaa waxaa ka hadlay isu imaatinkaasi Xildhibaan Xasan Macalin oo isagu ugu baaqay dowladda Talyaaniga in ay deg deg xorriyadiisa u siiso Mawaadinkaas Soomaaliyeed Xaashi Cumar Xasan.
“Soomaaliya waa ka daashay dhibaato waxay u baahan tahay cadaalada sidaasi daraadeed waxaan muujinaynaa in aan ka xunahay dhibaatada Xaashi Cumar Xasan, waxaana maalma ka hor u tagnay safiirka Dowladda Talyaaniga oo aan kala hadalnay arrinka Xaashi” Ayuu yiri XIldhibaanku.
“Anigoo ku hadlaya magaca xildhibaannada Soomaaliyeed waxaan Wasaarada caddaalada Talyaaniga aan ka codsaneynaa in xorriyaddiisa la siiyo maadaama ay qirteen marqaati beenaalayaashii Xaashi ku eedeeyay in uu dilay saxafiyiin u dhlatay talyaaniga”Ayuu sii raaiyay xildhibaanku.
Dowladda Talyaaniga ayaa xirtay Xaashi Cumar Xasan sanadkii 1998dii, ayadoo lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa dil loo geystay laba saxafi oo talyaani ah oo lagu dilay magaalada Muqdisho 20 March 1994tii. Maxakamad ku taalla Talyaaniga ayaa ku xukuntay 26 sano oo xabsi ah, inkastoo markii dambe ay maxkamaddu ka cafisay 6 san0.
GAROWE: Shirka Wada-tashiga oo maanta la soo gabagabeynayo
Shirkii Garowe oo la soo gabagabeeyay-DHAGAYSO WAR-MURTIYEEDKA